Afar qof oo ku dhimatay gobolka Bari kadib markii ay cabeen biyo sumeysan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandAfar qof oo ku dhimatay gobolka Bari kadib markii ay cabeen biyo sumeysan
Ceel biyood. [Sawirka: Puntland Mirror]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay kadib markii ay biyo ka cabeen ceel la sumeeyay oo kuyaala deegaanka Timirshe ee gobolka Bari, sida ay sheegeen dadka deegaan iyo ilo-wareedyo dhanka caafimaadka ah.
In ka badan shan qof ayaa sidoo kale ku jiratay natiijada biyaha ay isticmaaleen, sida ay ilo-wareedku sheegeen.
Intooda badan dadka dhibtu gaartay ayaa la sheegay in ay yihiin reer miyi.
Ma jirto wax jawaab ah oo weli kasoo baxday Wasaaradda Caafimaadka Puntland.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa magacaabay taliyaha sirdoonka, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah. Cabdiqafaar Yaasiin Yacquub, oo ah nin aan horey u soo qaban xafiis dowladeed, ayaa loo magacaabay taliyaha [...]
Garowe-(Puntland Mirror) Ku dhawaad boqol maleeshiyo Al-Shabaab ah ayaa tagay deegaanada miyiga ah ee hoostaga magaalada Ceerigaabo ee waqooyi-bari gobolka Sanaag, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Maleeshiyada ayaa halkaas tagtay intii lagu guda jiray maalmihii [...]